बागमती फेरि प्रदूषित «
बागमती फेरि प्रदूषित
बागमती नदी फेरि पुरानै लयमा अर्थात् नदी ठाउँठाउँमा प्रदूषित देखिएको छ । काठमाडौंको सुन्दरीजलदेखि बागमती नदीको अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान गर्दै आउने हो भने नदी फेरि पहिलेकै जस्तो दूषित देखिन थालेको छ । गोकर्ण हुँदै आउने यो नदीमा पछिल्ला केही दिनदेखि अत्यन्तै मात्रामा नदी धमिलिएको छ भने नदीछेउछाउमा प्लास्टिकजन्य वस्तुहरू देख्न सकिन्छ । यो हिउँद महिना हो, कुनै वर्षाको समय होइन, तर पनि तपाईं–हामी एकपटक पशुपति, गौरीघाट, बागमती करिडोर, जोरपाटी–गोठाटार सिमानासँग जोडिएको पुल हुँदै गोकर्ण–दक्षिणढोकातर्फ जाने हो भने नदी यति बिजोग तरिकाले धमिलिएर फोहोर भएको देख्न सकिन्छ कि लाग्छ, यो कुनै बर्खायाम हो ।
विगत केही वर्षदेखि अभियन्ताहरूले बागमती सरसफाइ अभियान चलाए पनि यो फेरि दूषित हुनुमा मानिसहरूको अत्यन्तै लापरवाही देखिन्छ । यसमा सम्बन्धित निकायले पक्कै ध्यान दिनैपर्छ । बागमती सरसफाइ अभियान प्रत्येक शनिबार कुनै न कुनै अभियन्ताहरूले सञ्चालन गरे पनि नदीवरपर करिडोर छेउछाउमा विभिन्न तरिकाले फोहोर मिसिने गरेको देखिन्छ । यसमा दोषी को ? किन मानिसहरूले नदी प्रदूषण गर्छन् ? र यसमा सम्बन्धित निकायले के गर्दै छ ? हेर्नुहोस्, उदाहरणका लागि तपाईं–हामी आफैं जोरपाटी–नयाँबस्ती हुँदै बग्ने बागमती करिडोरमा गएर हेर्न सक्छौं । बागमती यतिसम्म धमिलिएको छ कि यहाँ केही मानिसहरूले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न कतै नदीमा बालुवा चालेको पानी तथा कलकारखानाबाट निस्किएको फोहोरहरू रातारात मिसाउने गर्छन् । यसमा सबैको ध्यान पुगोस् । बागमती नदीमा फोहोरजन्य तरल पदार्थहरू मिसाउन पाइँदैन । बागमती नदी राजधानीभित्र भएर बग्ने बागमती नदी सभ्यताको चिनो हो । बागमती नदीको जगेर्ना गरौं । सफा राखौं । नदी फोहोर गर्नेलाई कडा कारबाही गरौं ।
जबसम्म तपाईं–हाम्रो वरपर प्रकृति सफा रहन्छ तबसम्म तपार्इं–हाम्रो समाज सम्मुनत रहन्छ । राष्ट्र सम्मुनत रहन्छ । हामीले खोलानाला मात्र होइन, समाजको वरपर देखिएका हरेक चोक, गल्ली, बस्ती सधैं सफा राख्नु तपाईं–हाम्रो दायित्व हो । त्यसैले हिजोका दिनहरूलाई स्मरण गराउँदै बागमती सफाई अभियान यहाँसम्म आउँदा पनि कसैले वास्ता नगरेको भए सायद आज बागमतीको अवस्था कल्पना गर्न पनि सकिने थिएन । आज आमसफाइ अभियन्ताहरू, नेपाल सरकार तथा सुरक्षा निकायले प्रत्येक शनिबार बागमती सरसफाइमा ध्यान केन्दि«त गरेर आज बागमतीको यो रूप देखा परेको हो । यसमा पनि अहिले बागमती छेउछाउमा रूखहरू पनि देख्न सकिन्छ भने शंखमूल हुँदै जाने बागमती छेउछाउको करिडोरमा पार्कहरू पनि निर्माण भएका छन् । स–साना बोटबिरुवाहरूले पार्क आकर्षक बनाएको छ । पार्कमा शंखको प्रतिमूर्ति राखेपछि बागमती करिडोर तथा नदी नै आकर्षक र सफा भएको छ । तर, सबै ठाउँमा यस्तो सफा भएको छैन । मैले माथि नै भनेको छु, सर्वप्रथम जोरपाटी–नयाँबस्ती हुँदै बग्ने बागमती नदी अत्यन्तै दूषित भएको छ । यो दूषित गराउनुमा कसको हात हो ? यसमा छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नु जरुरी देखिन्छ ।
बागमती सफा रहनु नै काठमाडौंको सभ्यताको विकास हुनु हो । त्यसैले तपार्इं–हामी सबैले बागमती सफाइ अभियानमा साथ सहयोग गर्नु आमनेपालीको दायित्व पनि हो । जहाँ प्रकृतिक खोलानाला सफा रहन्छन्, वरपर समाज तथा मुलुक पनि समृद्ध रहन्छ ।